Sirdoonka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay Rag shabaab ka tirsan. – The Voice of Northeastern Kenya
Sirdoonka Soomaaliya oo gacanta ku dhigay Rag shabaab ka tirsan.
Star FM January 7, 2019
War ka soo baxay Hay’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay howlgal qorsheysan ku soo qabteen sarkaal ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
War qoraal ah oo la soo dhigay Barta twitter-ka ee Hay’adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgalkaas ay Ciidamada Ammanaka Soomaaliya ka sameeyeen deegaanka lagu magacaabo Dugule oo ku dhow degmada toora toorow ee gobolka shabeelada Hoose lagu soo qabtay Sarkaal Shabaab u qaabilsanaa arruurunta lacagaha ay Zakawaadka u yaqaanan.
Warka Hay’ada NISA waxaa lagu sheegay in Ciidanka amniga ay 5-tii bihsaan xilil ahabeen ah, howlgal qorshaysan ku qaadeen saldhig ay Alshabab ku lahaayeen deegaanka Dugule, sidoo kalena Saldhigaas la burburiyay, waxaana sidoo kale ay sheegtay Hay’ada NISA in sarkaal dadka xoolo baad ah ka qaadi jiray gacanta lagu dhigay.
Hay’ada Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka Soomaaliya ee NISA mashaacin Magaca Shaqsiga ay sheegeen inay soo qabteen,hayeeshee Maalmihii la soo dhaafay ayaa Taliska Hay’adda Nabadsugida Soomaaliya waxaay shaacinayeen inay fuliyeen howlgallo lagu soo qabtay xubno ka tirsan xooggaga Al-Shabaab iyo Daacish.
← Wasaarada Cadaalada Soomaaliya oo sheegtay in dhawaan la furi doono xabsi cusub
Musharaxiinta Puntland oo maanta khudbadaha jeedinaya. →